Voadika ny 19 Oktobra 2018 16:00 GMT
Bedouin, jordaniana mipaozy any amin'ny iray amin'ireo taniefitra midadasika indrindra ao Jordana nalain'i Laith Majali
Miaraka amin'ny fankalazana ny Eid, fety ankalazain'ny Miozolomana maherin'ny iray miliara, mirary Eid mahafinaritra sy voatso-drano ho an'ny rehetra ny tontolon'ny blaogy jordaniana. Aza hadino ny sarin'i Ma'mool, ilay tsindrin-tsakafon'ny fialantsasatra, ary ny podcast manokana an'i Ahmad Humeid momba ny Eid.
Tsy mandalo herinandro tsara ny Fahalalahana maneho hevitra. Mitatitra i Sabbah fa mametraka olana ny Tetikasan-dalànan'ny Gazety sy ny Famoahan-dahatsoratra ary mila averina jerena tsara mba hahatratraran'ny Fanjakana ny tanjony voalazany amin'ny fanavaozana sy fanalalahana. Izany dia mifanjohy amin'ny fitazonana ilay blaogera Ejiptiana Abdolkarim Nabil Seliman, ary ny fanasaziana ilay Libiana, Abd al-Raziq al-Mansuri, mpanao gazety anaty Aterineto higadra mandritra ny herintaona sy tapany noho ny famoahana lahatsoratra mitsikera ny fanjakana.
Amin'ny sehatra iray eo an-toerana kokoa, manoratra momba ilay hetsika nataon'ny mpiaro ny tontolo iainana manohitra ny fandotoana an'i Wadi Himara i Shaden avy ao amin'ny Sugar Cubes raha toa ka manontany tena kosa i Firas avy ao amin'ny IHeartAmman hoe ”Nahoana no tsy manana Greenpeace isika aty Jordan?” Ambaran'i Natasha Tynes avy amin'ny Mental Mayhem, fa manelingelina no fahitany ilay tatitra vao haingana mikasika ny fampiasan'ny Jordaniana zava-mahadomelina, ary maminavina i Naseem Tarawneh avy amin'ny The Black Iris hoe ”Nahoana no tokony hanodidina ny zava-drehetra ao Jordana ny ahiahy?”
Mametraka fanontaniana ho an'ny rehetra i Lina Ejeilat mandritra izany fotoana izany – ‘‘Tsy manana ny fahafahana mihomehy ny tenantsika intsony ve isika?”, ary koa, manana sarin'ny fitsidihany ny Atsimon'i Jordan. “